ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ဘယ်လိုနည်းနဲ့တစ်ဦးက Man ရဲ့ယောဘသည်သူ၏ Romantic Personality Reveal နိုင်သလား
ဘယ်လိုနည်းနဲ့တစ်ဦးက Man ရဲ့ယောဘသည်သူ၏ Romantic Personality Reveal နိုင်သလား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 23 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
okay, ဒါကြောင့်သင်နက္ခတ်ဗေဒင်စရိုက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဂြိုလ်များ၏ alignment ကိုအပေါ်မှာအခြေခံသဟဇာတခန့်မှန်းရန်အသက်အရွယ်မရွေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုသိ?
... ခင်ဗျားမမွေးဖွားခဲ့ကြသည့်အခါတူနှင့်သင်တဲ့ "ရေသည်နိမိတ်လက္ခဏာကို" သို့မဟုတ်a"ကနေရောင်နိမိတ်လက္ခဏာနေစဉ်ဖြစ်စေအမှုအရာတွင်?"
ကောင်းစွာ, ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ Gig အပေါ်မှာအခြေခံအလားတူ system ကိုငါမဖွံ့ဖြိုးပါဘူး.
မှန်တယ်: အလုပ်၏မိမိအလိုင်းသင်သည်နှစ်ယောက်ချိန်းတွေ့နှင့်မိတ်လိုက်အရီနာကွင်းတွင်မှာ "အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်" ဟုဖြစ်စေမညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်.
system ကိုအလွန်အမင်း "သိပ္ပံနည်းကျမဖြစ်စေခြင်းငှါသော်လည်း,"ဟုတ်မှန်ကြောင်းကျယ်ပြန့်လေ့လာစောင့်ကြည့်အပေါ်မှာအခြေခံနေတယ်, စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း, အနက်ကို, အနည်းငယ်မှတ်တမ်းတင်လယ်ပြင်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့်အသုံးစရိတ်ချိန် "ကြွက်များ။ "
သင်အောင်မြင်စွာတက်ချိတ်သူထဲကခန့်မှန်းအလုပ်အချို့ကိုယူလိုလျှင်, ရေရှည်တည်တံ့သောရလဒ်များကိုနှင့်အတူ, ဖတ်နှင့်သတိပြု.
စာရေးဆရာနှင့်ကဗျာဆရာ (အဆိုပါ artsy အမျိုးအစား)
ဤလူတစ်ဦးချင်းစီနန်းအောင်ထွေးကြည်ဖြစ်လေ့, ရင်ခုန်စရာ, နှင့်စေ့စပ်. သူတို့ကထက်ဝက်အပြည့်အဝအဖြစ်ပုံဖန်ခွက်ကိုမြင်ရ. သူတို့ဟာမကြာခဏကြီးမြတ် conversationalist င်, အတူထွက်ဆွဲထားဖို့နဲ့တကယ်ပျော်စရာ. သူတို့ကသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းအထီးဗားရှင်းင်. ဒါပေမယ့်သတိထားဖ​​ို့: အဲဒီ "အခမဲ့ညူးသောနတ်ဆိုး" တခါတရံတွင်ကတိကဝတ် phobic ဖြစ်နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်.
အုပ်ချုပ်မှုကိုခြွင်းချက်အချို့ရှိပါသည်သော်လည်း, ကိုသွန်သင်တော်မူသောလူတို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကြင်နာကြတယ်, လူနာ, တိရိစ္ဆာန်နှင့်ကလေးများနှင့်အတူအကောင်း, နှင့် "မြန်ဆန်ပြီးလေ့လာမှုဖြစ်ကြ၏။ " ဤသူတို့အထက်ပျှမ်းမျှအားကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူကြီးမြတ် Multi-taskers ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကို Add.
အကောင့်နဲ့ Numbers CRUNCHERS
ဤအမျိုးအစားတွင်အမျိုးသားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှေးရိုးစွဲအမျိုးအစားများမှာ. သင်တို့သည်ဤအ cuties oriented အသေးစိတ်ဖြစ်ခြင်းအပေါ် "ကိုရေတွက်" နိုင်, အချိန်မှန်, အဖြစ်ကောင်းစွာနှင့်ငွေ pinchers. သူတို့ကစံချိန်စံညွှန်း exacting ပါပြီ. အကယ်. သင်သည်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားထဲသို့ဆိုရင်, ဖြောင့်-ဇာ, လက်တွေ့ကျတဲ့အမျိုးအစား, သင်သည်ဤအရပ်၌ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ရဲများ, နောက်ကျတော့မီးသတ်သမားများ, နှင့်အမျိုးသားသူနာပြုတစ်ဦး
"ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခံရရန်အဘယ်အရာမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမကြိုက်ပါဘူး?"ဒီနယ်ပယ်များတွင်ယောက်ျားတွေရဲရင့်ဖြစ်ကြောင်းသိကြသည်, အကာအကွယ်ပေး, သော authoritative, နှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့. ထိုအခါငါသူတို့သည်ကောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေပုံမှန်အားဖြင့်နေဖော်ပြထားခြင်းခဲ့? အများစုမှာ oriented အလွန်လူမျိုးဖြစ်ကြ၏, တစ်ဦးဂုဏ်အသရေ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်တာဝန်နှင့်အတူ.
သင်သည်ထိုသူတို့ဆက်ဆံရေးကိုအတွက် "တန်းတူညီတူ" မိတ်ဖက်ဖြစ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်.
သင်ယုတ္တိဆိုရင်သင်ဟာဒီအပေါင်းအဘော်တို့နှင့်အတူကို click ပါလိမ့်မယ်, အကြောင်းကြား, introverted, ကောင်းသောအကျင့်ကိုပြဿနာ solvers မ​​ျားမှာ; သူတို့သည်လည်းရှိပါတယ်.
သူ့ရဲ့ "အလုပ်" နားရွက်တပိုင်းကိုအာလူးအဖြစ် moonlighting ဖြစ်ပါတယ်.
ဤတွင် script ကိုဖွင်.
သူကဆဲ "။ ကိုယ်ကိုကိုယ်ရှာတွေ့နိုင်ရန်" ကြိုးစားနေဒါမှမဟုတ်ဆင်းသည်သူ၏ကံဇာတာအပေါ်အစဉ်အမြဲဖြစ်မယ်. သို့မဟုတ်နေဆဲသုံးဆယ်မှာကျောက်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ခြင်းသည်သူ၏အိပ်မက်ကိုလိုက်ရန်ကြိုးစားနေသည်. မှန်သော? ထိုသို့ဖြစ်လျှင်, သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများနှင့် "ပန်းရောင်စလစ်" မကြာမီသူ့ကိုစဉ်းစားရန်လိုပေမည်.
BLUE ကော်လာ VS. ကော်လာဖြူလုပ်သား–မရှိသော သာ. ကောင်း၏?
ဆုံးဖြတ်ချက်များချ, ဆုံးဖြတ်ချက်များ. လုပ်ဖို့ကမိန်းကလေးဆိုတာဘာလဲ?
ကအပြာရောင်ကော်လာသောသူကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အဖြူကော်လာ cutie ချိန်းတွေ့ကြ သာ. ကောင်း၏?
အပြာရောင်ကော်လာယောက်ျားတွေမကြာခဏဆင်းမြေကြီးနှင့်သူတို့လက်နှင့်အတူကောင်းပါတယ်. သူတို့ကအတူဖြစ်များသောအားဖြင့်လွယ်ကူင်, စစ်ဆေးမှုများအတွက် egos နှင့်အတူ. နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်, သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးပြန်ချထားပါတယ်.
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သာ. ကြီးဝင်ငွေအလားအလာရှိသည် White ကကော်လာယောက်ျားတွေ, ဦးနှောက်ဖြစ်လေ့, အရာနှင့်ကြီးစွာသောပြဿနာ solvers မ​​ျားမှာ.
အဲဒီမာအ​​စာရှောင်ခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမဟုတ်ပေမယ့, သင်သည်များစွာသောချိန်းတွေ့အခြေအနေများသူတို့ကိုသက်ဆိုင်သောတွေ့ပါလိမ့်မယ်. သင်ပြုသမျှအတိုင်း, ကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ.
နောက်ဆုံးတော့, မေတ္တာကိုအရေးကြီးသော "စီးပွားရေးလုပ်ငန်း" ဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ Impressions – usernames